जसरी पनि विधेयक पास गराउछौं – सत्तापक्ष, कुनै पनि हालतमा रोक्छौं – एमाले « AayoMail
संसदमा द्वन्द्व बढ्यो :
जसरी पनि विधेयक पास गराउछौं – सत्तापक्ष, कुनै पनि हालतमा रोक्छौं – एमाले
2021,14 September, 12:06 pm
प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाए। संसदमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै नआएपछि सर्वदलीय बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन।
मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर, विना निष्कर्ष टुंगिएको सर्वदलीय बैठकको भोलिपल्ट बस्न लागेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायमै रहने सम्भावना देखिएको छ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ‘टस्ल’ प्र्रायः सत्ता पक्षसँग हुने गरेको देखिन्छ। तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच ‘टकराव’ को अवस्था देखिएको हो।
माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना टाँस नगरेपछि एमाले सभामुख सापकोटाप्रति ‘क्रुद्ध’ बनेको छ। र, संसदको अवरोध अन्त्यका लागि उसले कि त कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने कि सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सारेको छ।
सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ‘टकराव’ कै बीच सरकारलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसदमा पेश भएको बजेट पारित गराउने बाध्यता छ। बुधबारसम्म बजेट पारित नभए कर्मचारीका तलब रोक्का हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने सम्भावना छ।
त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै बीच सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक जसरी पनि पारित गराउने रणनीति लिएको छ। र, यसको संकेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दिइसकेका छन्।
एमाले सहमतिमा नआए पनि विधेयक पास गर्नुपर्ने देउवाले सर्वदलीय बैठकमा भनेका थिए।
‘एमालेले संसदमा द्वन्द्व निम्त्यिाउन खोजेको छ। विधेयक पारित गर्नुको विकल्प छैन,’ देउवाले भनेका थिए,‘एमालेले अवरोध जारी राखे पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नतर्फ सरकार अगाडि बढ्छ।’
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउने तयारी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने आफूहरूको विरोध कायमै रहने बताएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दा संदनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यो जिम्मेवारी सरकार र सभामुखकको रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन्।
‘आज पनि पूर्ववतरूपमा हाम्रो विरोध नै हुन्छ संसदमा,’ भट्टराईले आयोमेलसँग भने,‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदमा एउटा पोजिसन हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएर, बेल घेराउ गर्नु ‘अप्टिमम’ हो। त्यति गरिसकेपछि कसरी रेस्पोन्स गर्ने सभामुख र सत्तापक्षले जान्नुपर्ने कुरा हो।’
सभामुखले आफ्नो गल्ती नसच्याएसम्म उनको नेतृत्वमा संसद चल्न नसक्ने भट्टराईले बताए। ‘सभामुखले गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँले गल्ती सच्याउनु प¥यो कि मार्गप्रशस्त गर्नुप¥यो। यति नहुँदासम्म उहाँको नेतृत्वमा संसद चल्दैन अब,’ भट्टराईले भने।
सभामुखलाई तारो बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनाहकमा जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई किनारा लगाउन खोजिरहेको सत्तापक्षको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्नबाट अब नरोकिने उसले बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई ‘इस्यु’ बनाएर जनसरोकारका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू संसदमा छलफल हुन नदिने नीति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिएको बताउँछिन्।
‘१४ जना सांसदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। एमालेले राजनीतिकरण गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको छ,’ भुसाल भन्छिन्,‘सभामुखलाई निशाना बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक अभिष्टमात्र पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहे पनि संसदबाट विधेयकहरू पारित हुने उनले संकेत गरेकी छिन्।
‘हाउसको जिम्मेवारी के? बजेट पास गर्ने जिम्मेवारी हो कि होइन? अध्यादेशहरू पारित गर्ने जिम्मेवारी हाउसको हो कि होइन?,’ उनले भनिन्,‘अर्थतन्त्र, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयसँग बजेट जोडिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्राथमिकतामा यी विषयहरू परेको छैन। उहाँहरूले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर गर्न लागि रहे पनि मलाई लाग्छ महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदबाट पास हुन्छ।’